डेढ खर्बले घट्यो बजेट , वृद्धिदर लक्ष्य नजिक पुग्ने – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार ११:२२
डेढ खर्बले घट्यो बजेट , वृद्धिदर लक्ष्य नजिक पुग्ने
बजेटको आकारसँगै चालू, पुँजीगत र वित्तीय खर्चमा पनि संशोधन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालूतर्फ नौ खर्ब चार अर्ब ४६ करोड आठ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । यसअघि सरकारले बजेटमा नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपियाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ९९ करोड स्रोत सङ्कलन गर्ने लक्ष्य ४३ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ पु¥याइएको छ । वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड लक्ष्य रहेकामा त्यसको आकार पनि घटाएर दुई खर्ब नौ अर्ब ९० करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । खतिवडाले संशोधित अनुमान गरिएका परिवर्तन सामान्य रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । विगत एक दशकका बजेट हेर्दा हामी राम्रो स्थानमै छौँ, संशोधित अनुमान आर्थिक वृद्धिको निर्धारित लक्ष्य नजिक नै पु¥याउने छौँ ।
वृद्धिदर लक्ष्य नजिक: सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमा निर्धारित लक्ष्यको नजिक आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर, औद्योगिक उत्पादनमा भएको विस्तार, होटल पूर्वाधारमा बढेको लगानी, जलविद्युत्, सडक र विमानस्थल निर्माणमा आएको तीव्रताजस्ता कारणले चालू आर्थिक वर्षमा उच्च वृद्धिदरको निरन्तरता कायम भएकाले लक्ष्य नजिक वृद्धिदर पुग्ने बताउनुभयो । चालू आवको बजेटमा सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ ।
आर्थिक सूचक सकारात्मक: चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको सरकारले जनाएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको र मुद्रास्फीति पनि निश्चित सीमाभित्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ । विगत छ महिनामा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो अवधिको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले बढेको, आयात ४ प्रतिशतले घटेको, व्यापार घाटा पनि ६.१ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क छ । मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत कायम छ । यद्यपि अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत थियो ।
कोराना नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कपिलवस्तु नगरपालिकाले ३० प्रतिशत भत्ता दिने
PREVIOUS Previous post: प्रहरीले रोके बालविवाह
NEXT Next post: एमसिसी सम्झौता नेपालको लागि खतरा – अध्यक्ष विजुक्छे